Abazimeleyo beWWDC babonisa imifanekiso kunye neevidiyo | Ndisuka mac
Abantu abazimasa intetho ephambili yeWWDC babonisa imifanekiso kunye neevidiyo
Abaphuhlisi abanethamsanqa kunye nemithombo yeendaba ekhethekileyo eqokelela namhlanje e IZiko leNgqungquthela yaseSan Jose McEnery, Baqala ukwabelana ngemifanekiso emgceni wangaphandle kunye neziko lendibano uqobo kunye nevidiyo ezibukhoma. Inyani yile yokuba ngaphezulu nje kweeyure ezintathu ngaphambi kokuba intetho ephambili iqale ngokusesikweni kwaye abantu sele belayini ixesha elithile ukufikelela kwiziko lendibano.
Kucacile ukuba kukho umnqweno wenqaku eliphambili kwaye amanye amajelo eendaba nawo aqala ukusasaza kwi ngqo kwi-intanethi ye-Youtube, ke siyishiya yonke le nto ngasemva kokutsiba ukuze ubone intshukumo ngaphambi kokuqala kwalo msitho ulindelwe ngu-Apple ngoJuni.
Abahlobo phakathi I-9to5Mac isishiye ngqo kwi-YouTube ukuze sikwazi ukubona inkqubela phambili yendawo ebiyelweyo:
Nantsi eminye imifanekiso evela kumajelo eendaba -njengezo zivela kwi-Indian Express- kunye nezinye ezikwimo ye-tweet evela kwabo bazimase umsitho, owaziwayo uFederico Viticci:
Ukungena # WWDC17 pic.twitter.com/lG9Y9itdRk
-Federico Viticci (@viticci) 5 Juni ka 2017
Uninzi lweendaba apha. (Uninzi lwabantu ngokubanzi kodwa izinto zibonakala ngathi zilungelelene kakhulu.) pic.twitter.com/GDo9wGKpC9
-Neil Cybart (@neilcybart) 5 Juni ka 2017
Kwezi foto zifikayo ungabona ukuba kwimizuzu ngaphambi komsitho indawo leyo ibithule, kodwa ukuba sijonga ividiyo ebukhoma yendawo kangangexesha elithile siyabona ukuba ulayini sele ubalulekile. Ngaphandle kwamathandabuzo umsitho uphakamisa ulindelo njengoko iApple isiqhele kwaye ngeli xesha sinokuthi kwinto engaphezulu nanjengoko isisithethi sokuqala sonyaka Kuyo, ukongeza kwisoftware abaza kuyibonisa, banokusibonisa izixhobo ezithile zekhompyutha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Abantu abazimasa intetho ephambili yeWWDC babonisa imifanekiso kunye neevidiyo
I-tvOS ihlaziywa kwaye iAmazon app iqinisekisiwe
UApple uza kusasaza iWWDC bukhoma kwaye nam ndivela eMac